I-Apple ifumana ukuqala kwiVisage, ingcali kwiimvakalelo zekhamera | Ndisuka mac
I-Apple ifumana ukuqala kwiVisage, ingcali yesandi sekhamera
Idabi lokuba nekhamera ebalaseleyo kwisixhobo esiphathwayo bekuqhubeka kangangexesha elithile. Isamsung, iHuawei, iApple, njl. ngawona magama aziwa kule ngqiqo. Kwaye kunjalo Ukuhanjiswa kweefowuni kumise ngokupheleleyo iikhamera ezihambelanayo kunye nabasebenzisi bagqiba kwelokuba babheje kwiifoto eziziimobhayili ngeeselfowuni.
Nangona kunjalo, iApple ifuna ukuqhubeka nokwenza uphuculo kule meko. Uyazi ukuba isiphelo sendlela esinamandla kule nto kuya kuyonyusa intengiso yakho. Kuya kufuneka ujonge ekuphuculeni inqaku 'lomfanekiso' kukhupho lwamva nje ukubona ukuba inkulu kangakanani le ntsimi. Kwaye ukuphucula U-Apple uthathe indawo qalisa KwiVisageInkampani esebenza nzima kwiimvakalelo zekhamera yeselfowuni ngenxa yetekhnoloji yayo ebizwa ngokuba yi "QuantumFilm ™".
Obu buchwephesha buqhayisa ngokusebenza ngcono kunokhuphiswano. Ngokwenkampani uqobo, I-QuantumFilm iyakwazi ukufezekisa ezona nkcukacha ziphakamileyo ngaphandle kokukhanya okukhoyo ngalo mzuzu. Ngokunjalo, kwaye njengenxalenye eyomeleleyo yokuzibophelela kwe-Apple, iisenzi zayo zihlala kwindawo encinci kunesiqhelo kwicandelo. Into enokuba ngumdla omkhulu kwabo baseCupertino ukwaziswa kwexesha elizayo, kungekuphela kweefowuni eziphathwayo, kodwa nakwi-iPad okanye kwidesktops nakwiilaptops- iifowuni zevidiyo sisixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabasebenzi abakude.
nayo, into enomdla kakhulu kwi-Visage kukuba bazenzela imveliso ngokwabo; Oko kukuthi, ukuba yonke into iqhuba ikhosi, iApple ayinakuphinda ixhomekeke kubantu besithathu ukuba bazise iikhamera kwiimveliso zayo, ziya kuba ziimveliso zento ngokwazo. Ngamanye amagama, iApple iyaqhubeka nokufuna ukubanakho ukujongana nawo onke amacandelo ngokwawo ngaphandle kokunxibelelana nezinye iinkampani- ngokuqinisekileyo ucinga malunga nezikrini. Kwaye kubonakala ngathi kancinci kancinci ufumana umceli mngeni. Siza kubona ukuba yeyiphi inyathelo elilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ifumana ukuqala kwiVisage, ingcali yesandi sekhamera
I-Apple ikhusela iyantlukwano kunye nokubandakanywa kwezentlalo kwividiyo entsha
I-Twiterrific kunye ne-Tweetbot ngoku ixhasa ii-tweets ezingama-280